कसरी भिडियो बाट एक gif बनाउन: कार्यक्रम र अनुप्रयोगहरू | क्रिएटिव अनलाइन
कसरी भिडियो बाट एक gif बनाउन
एनकर्नी आर्कोया | 14/06/2021 15:55 | अद्यावधिक गरियो 14/06/2021 15:58 | ट्रिक्स
यो भिडियो रेकर्ड गर्न हाम्रो लागि झन् झन् सामान्य हुँदै गइरहेको छ। तर त्यो पनि हामी ती भिडियोहरू हामीले महसुस गरेका छौं भन्ने अभिव्यक्तिको रूप बन्न चाहन्छौं। समस्या यो हो कि सबैलाई थाहा छैन कि भिडियोबाट कसरी जीआईएफ बनाउने। के यो तपाईलाई हुन्छ?
यदि तपाइँ यो कसरी गर्ने थाहा छैन भने, र तपाईंलाई तुरून्त आवश्यक छ gif मा एक भिडियो रूपान्तरण, यहाँ हामी तपाइँलाई बिभिन्न विकल्पहरू दिनेछौं, किनकि ती केवल अनुप्रयोगहरू मार्फत मात्र गर्न सकिदैन; त्यहाँ सम्भावना पनि छ कि तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दैन।
1 एनिमेटेड gifs के हो?
2 कसरी भिडियो बाट एक gif बनाउन: तपाईंसँग विकल्पहरू
3 प्रोग्रामहरू सहित भिडियोबाट कसरी GIF बनाउने
4 अनुप्रयोगको साथ भिडियो बाट एक gif कसरी बनाउने
4.3 GIF निर्माता
5 अनुप्रयोग बिना भिडियो बाट एक gif कसरी बनाउने
एनिमेटेड gifs के हो?
जब यो भिडियोबाट GIF कसरी गर्ने सिक्ने कुरा आउँछ, पहिलो कुरा तपाईको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ: हामी कस्तो किसिमको gif भन्न सक्छौं। तपाईंलाई थाहा छ, gif छवि ढाँचा हो। यो jpg भन्दा कम भारी छ, जुन सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ, र एकै समयमा यो ती मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई पारदर्शी पृष्ठभूमि बनाउन अनुमति दिन्छ। तर त्यहाँ एनिमेटेड gifs पनि छन्।
यी हुन् एक सतत लूपमा सिर्जना गरिएका एनिमेटेड दृश्यहरू। उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईसँग एक नोटबुक छ र प्रत्येक पानामा तपाईले चरित्र चित्रण गर्नुहुन्छ जुन प्रत्येक पानामा हिडिरहेको छ। यदि तपाईं ती सबैलाई लिनुभयो र द्रुत रूपमा स्वाइप गर्नुभयो भने, यो भिडियो जस्तो देखिन्छ, हैन? खैर, त्यो के हो एनिमेटेड gif को बारेमा हो। यो छवि वा फ्रेमहरूमा आन्दोलन दिने एउटा तरिका हो।
जहाँसम्म, अहिले, भिडियोहरू पनि सजीविक gifs बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कसरी भिडियो बाट एक gif बनाउन: तपाईंसँग विकल्पहरू
जे होस् हामी तल ती प्रत्येकको विकास गर्न जाँदैछौं, तपाईले यो जान्नुपर्दछ कि एनिमेटेड gifs, वा के समान छ, एक gif को आन्दोलनको साथ बनाउन (या तस्बिरहरू वा भिडियो सहित) प्राप्त गर्न सकिन्छ:
वेब अनुप्रयोगहरूको साथ, दुबै मोबाइल फोन र कम्प्युटरहरूको लागि।
एनिमेसन प्रोग्रामहरूको साथ। धेरै जसो (राम्रो व्यक्ति) भुक्तान गरिन्छ र यदि तपाईं यसलाई प्रयोगकर्ता स्तरमा मात्र प्रयोग गर्न लाग्नुभयो भने यो खर्चको लागि लायक हुँदैन।
आधारभूत कार्यहरूको साथ निःशुल्क प्रोग्रामहरूको साथ।
प्रोग्रामहरू सहित भिडियोबाट कसरी GIF बनाउने
त्यहाँ धेरै भिडियो सम्पादन कार्यक्रमहरू छन्। र छवि पनि। यदि तपाईं भिडियोको GIF बनाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले पछिल्लोमा निर्भर हुनु पर्छ यो प्राप्त गर्नका लागि। त्यसकारण जिम्प, फोटोशप र मनपराउनको लागि सबैभन्दा साधारण विकल्पहरू हुन्छन्, यद्यपि त्यहाँ अरु पनि छन् जुन इम्फ्लिप जिफ क्रिएटर, माइक्रोसफ्ट जीआईएफ मेकर, रेकर्ड फास्ट स्क्रिनकास्ट, शउट जस्ता काम गर्न सक्दछन् ...
सब भन्दा सामान्य, विशेष गरी डिजाइनरहरूको लागि, फोटोशप हो, किनकि यो सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। यससँगका चरणहरू:
भिडियो फोटोशपमा खोल्नुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले फाईल / इम्पोर्ट / भिडियो फ्रेमहरूमा लेयर (फ्रेममा तहसम्म) जानु पर्छ।
त्यसपछि गुण समायोजित गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको भिडियो धेरै लामो छैन, तर केही सेकेन्ड मात्र। अन्यथा, धेरै भारी भएको बाहेक, तपाईंसँग यो सम्पादन गर्न स्मृति नहुन सक्छ।
यसलाई GIF को रूपमा बचत गर्नुहोस्।
अनुप्रयोगको साथ भिडियो बाट एक gif कसरी बनाउने
को लागी भिडियोबाट GIF बनाउनका लागि अनुप्रयोगहरू, सत्य यो हो कि त्यहाँ यसको लागि धेरै विकल्पहरू छन्। ती सिफारिसहरू मध्ये:
आईओएस र एन्ड्रोइड दुबैका लागि उपलब्ध छ, तपाईं भिडियो वा धेरै फोटोहरूबाट जीआईएफ सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई पाठहरू, स्टिकरहरू, स्टिकरहरू, फिल्टरहरूसँग सजावट गर्न र यसलाई केहि विशेष प्रभावहरू बनाउँदछ जसले यसलाई अनौंठो स्पर्श दिन्छ।
हामी यसलाई मनपराउँदछौं किनकि यसले तपाईंलाई छनौट गर्न अनुमति दिन्छ कि हामी GIF निरन्तर वा एक पटक मात्र खेल्न चाहन्छौं।
यस अवस्थामा, पल हाम्रो ध्यान आकर्षण किनभने तपाईं एक भिडियो वा फोटोबाट एक GIF सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं पृष्ठभूमि संगीत थप्न सक्नुहुन्छ। यसले अन्य अनुप्रयोगहरू जस्तै कार्य गर्दछ, जस्तै पाठहरू, स्टिकरहरू, काट्ने टुक्रा, इत्यादि। तर अडियो भनेको तपाईको ध्यान सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्न सक्दछ।
बुझ्नलाई सजिलो। यो एक अनुप्रयोग हो, जब तपाई यसलाई प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई केहि फोटोहरू वा भिडियो अपलोड गर्न अनुमति दिँन्छ जसले तपाईंलाई रुचि दिन्छ। यो ह्यान्डल गर्न एकदम सजिलो छ जसले तपाईंलाई बनाउँदछ, सेकेन्डको मामलामा, तिनीहरूलाई कसरी धेरै सिर्जना गर्ने जान्नुहोस्।
राम्रो कुरा त्यो हो योसँग GIF को डाटाबेस पनि छ, त्यसोभए यदि तपाइँ यसलाई सिर्जना गर्न चिन्तित हुन चाहानुहुन्न भने, तपाइँ पाठहरू, चित्रहरू वा स्टिकरहरूको साथ तपाइँलाई मनपर्दो सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ सिर्जना गर्न टेम्प्लेटको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
केवल खराब चीज यो छ कि कहिलेकाँही तिनीहरूले तपाइँलाई विज्ञापन दिन्छन्, तर यो पर्खाइको लागि लायक छ (र विज्ञापन निगल्छ) यदि तपाईं यसलाई प्राय जसो प्रयोग गर्नुहुन्छ।
हो, मेसेजिंग अनुप्रयोग आफैं अब तपाईंलाई एक भिडियो बाट एक gif बनाउन अनुमति दिन्छ। यो गर्नका लागि तपाईले क्यामेरामा क्लिक गर्नुपर्नेछ, जहाँ तपाईले अनुप्रयोगको तस्विर लिनुहुन्छ।
भिडियो बनाउनको लागि होल्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि एक gif बनाउनको लागि मात्र क्रोप गर्नुहोस् (यसले तपाईंलाई कटआउट भागमा देखाउनेछ)। कुराको तथ्य यो हो कि GIF भिडियो छ सेकेन्ड भन्दा कम लामो छ।
अब, यदि तपाईंलाई ग्यालरीबाट भिडियो चाहियो भने नि? कुनै समस्या छैन, तपाईंले भिडियो संलग्न गर्न ग्यालरीमा हिट गर्नुभयो र फ्रेमहरू देखा पर्नेछन्। फेरि तपाईं छोटो अनुक्रम (छ सेकेन्ड भन्दा कम) छनौट गर्नुहोस् र तपाईं यसलाई सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
अनुप्रयोग बिना भिडियो बाट एक gif कसरी बनाउने
माथिका सबै पछि, तपाईं कुनै प्रोग्राम गर्न चाहनुहुन्न। न त तपाईं अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहुन्छ वा तपाईंको भिडियोलाई बाह्य वेबसाइटहरूमा अपलोड गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईंलाई थाहा हुँदैन उनीहरूले पछि के गर्ने छन्।
त्यसोभए, तपाईले छोड्नुभएको विकल्प भनेको केहि पनि प्रयोग नगरी कसरी भिडियो बाट जीआईएफ बनाउने भनेर जान्नको लागि हो। र हो, यसलाई पूरा गर्न सम्भव छ। वास्तवमा, यो एक चाल हो कि राम्रोसँग थाहा छैन, तर त्यो फिक्सको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो गर्न, तपाईं हुनेछ तपाइँको भिडियो यूट्यूबमा अपलोड गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ तपाईंसँग साझेदारी गर्न विकल्प छ। तर यो सम्मिलित गर्ने, ईमेल गर्ने र GIF को पनि। र त्यहाँ तपाईं केहि गर्न को लागी गर्न सक्षम हुनेछ जहाँ अरू केहि गर्न को लागी तपाइँ बिना। अवश्य पनि, दिमागमा राख्नुहोस् कि सबै YouTube भिडियोहरूसँग यो विकल्प छैन; अर्को शब्दहरुमा, यो तिनीहरु सबैमा देखा पर्दैन, तर तपाई केवल केहि मा देख्नुहुनेछ।
ती जो तपाईंलाई छोड्छन्, तपाईले मात्र यो छनौट गर्नुपर्दछ जब यो सुरु गर्नुहोस् र कहिले अन्त हुन्छ। यसले तपाईंलाई एउटा पाठ थप्न दिनेछ र अन्तमा, "GIF सिर्जना गर्नुहोस्" मा क्लिक गरेर, तपाईं यसलाई केही सेकेन्डमा पाउनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्रिक्स » कसरी भिडियो बाट एक gif बनाउन
भिडियो कम्प्रेस गर्नुहोस्
फोटोशपमा कसरी ड्राइंग प्रभाव बनाउने